HR Associate | Thuriya Win Company ﻿
28.5.2019, Full time , Export / Import / Trading
Company: Thuriya Win Company
It is distributing wholesale and retail sale tea in the domestic market sector ever since.The company has own distribution channel and several distribution branches throughout the country.It has own as well as managed tea processing factories and has achieved GMP and ISO 9001;2008 Quality Certificates. Apart from tea,the company has expanded into the food stuff industry,plantation and is gearing up to enter the instant food industry.Thuriya Win Company Limited involves mainly in Agri Business and Food Processing Industry and was founded in the year 1980.It specializes in Tea business and uses the name Nagar Pyan for its brand.
HR Associate (or) Senior staff
•	အသက်၂၀ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	HR Certificate ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	Finger Print Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	Computer Word , Excel & PPT and Internet Email ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Work location အမှတ် ၄၂၊ရွှေသရဖီရိပ်မွန်၊ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့
Company Industry: HR Associate
Job posted: 28/5/2019
Advertising Assistant Supervisor
42 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	အသက် (၂၅ - ၃၅) နှစ် ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ •	ကြော်ငြာ (တပ်ဆင်ရေး) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ •	Customer များနှင့် ကောင်းမွန်သော Relationship တည်ဆောက်နိုင်ရမည်။ •	ရုံးချုပ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပူး� ...
54 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	လုပ်ငန်းအား စိတ်ဝင်စားပြီး သွက်လက်၍ ဆက်ဆံရေးကောင်မွန်ရမည်။
Tea Shop Supervisor
•	Customer များနှင့် ကောင်းမွန်သောRelationship တည်ဆောက်နိုင်ရမည်။
114 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	လုပ်ငန်းအား စိတ်ဝင်စားပြီး သွက်လက်၍ ဆက်ဆံရေးကောင်မွန်ရမည်။ •	Promotiom ကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Sales Assistant (Tea Test Assistant)
•	လုပ်ငန်းအား စိတ်ဝင်စားပြီး သွက်လက်၍ ဆက်ဆံရေးကောင်မွန်ရမည်။ •	ကမာရွက်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	စက်ရုံ Operation ပိုင်းကောင်းစွာလည်ပတ် နိုင်ရန်နှင့် ၀န်ထမ်းများအား ကောင်းစွာစီမံ အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံ (၁၄ လမ်းဆုံအနီး) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
194 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	Export & Import လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Computer Microsoft Word, Excel, Power Point, Myanmar Font ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	Internet, Email ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	English (ရေး၊ ဖတ်၊ ပြော) နိုင်ရမည်။
201 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	လုပ်ငန်းအား စိတ်ဝင်စားပြီး သွက်လက်၍ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
222 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	လုပ်ငန်းအား စိတ်ဝင်စားပြီး သွက်လက်၍ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ကမာရွတ်မြို့နယ်/မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Admin & HR Supervisor
•	မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် Tea Shop ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
224 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	ရန်ကုန်မြို့တွင်း လမ်းကြောင်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
224 Days, Part time , Export / Import / Trading
•	မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် နှင့် ကမာရွတ် မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	FMCG အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Office Trainee (Admin)
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးအရက်သေစာ သောက်စားခြင်းကင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	ကမာရွတ်မြို့နယ် (ရုံးချုပ်)၊ရွှေပြည်သာတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအားစိတ်ဝင်စားပြီး သွက်လပ်၍ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	FMCG အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	ကြိုးစာလိုစိတ်၊သင်ယူလိုစိတ် အပြည့်အ၀ရှိပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ကမာရွတ်မြို့နယ် ရုံးချုပ် တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်
•	ဆိုင်/ရုံးအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု အပိုင်းကို စိတ်ဝင်စား/လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	နေ့လည် ထမင်းကျွေးမည်။ •	ရန်ကင်း/ကျောက်ကုန်းတွင် တာဝန်ထမ်ဆောင်ရမည်။
248 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ •	ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာ သွားလာနိူင်ရမည်။ •	Supermarket များသို့ Bus car ဖြင့် သွားရောက်၍ Record & Report များအား ပြုလုပ်နိူင်ရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။
•	သွက်လက်တက်ကြွပြီး အလုပ်အား စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	အဆောင်ပေးမည်၊ ထမင်းကျွေးမည်။ •	ရန်ကင်းမြို့နယ် Tea Shop ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Tea Shop ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်/အဆောင်နေနိုင်သူ ပိုဦးစားပေးမည်။
•	(Hotel & Restaurant) ပိုင်းတွင်FMCG ( လက်ဖက်ခြောက်) Product နှင့် ပါတ်သက်၍ သွားရောက် Marketing ဆင်း၍ Distribution ပြုလုပ်နိူင်ရမည်။နယ် (Hotel & Resturent) များအားလည်း သွားရောက် Marketing ဆင်းနိူင်ရမည်။ •	(Hotel & Resturent) အရောင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆ� ...
252 Days, Full time , Export / Import / Trading
Finished Good Store Incharge
•	ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Finished Good Store Incharge (Supervisor)
266 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Assistant Supervisor (Warehouse)
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အရက်သေစာသောက်စားခြင်း ကင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	ကမာရွတ်မြို့နယ် (ရုံးချုပ်)နှင့် ရွှေပြည်သာတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ HR Associate (or) Senior staff
•	စားသောက်ကုန် လက်ဖက်ခြောက်များအားရန်ကုန်မြို့နှင့် နယ်မြို့များတွင်ရှိသော (Hotel & Restaurant) များအားဖြန့်ချီရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ Sales Representative (Hotel & Restaurant)
274 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	Must be served at Kamayut Township. •	Good Communication skills
•	ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	Finger Print နှင့် Download ဆွဲပြီး Attendance ပြုလုပ်ရမည်။ •	ရုံးချုပ်နှင့် ရုံးခွဲများတွင်ရှိသော ၀န်ထမ်း (270) ဦး၏ Atten; နှင့် OT အား Daily & Monthly ပြုလုပ်ရမည်။ •	၀န်ထမ်းများ၏ JD အား Update ပြုလုပ်ရမည်။ •	Training နှင့် CSR ပါတ်သက်သည့် ရုံးမိန� ...
281 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	ရန်ကင်းမြို့နယ် (Tea Shop) ၀န်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အရက်သေစာသောက်စားမူကင်းရမည်။ •	အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားနိူင်သည်။
•	ရန်ကင်းမြို့နယ် Tea Shop & Food Drink ဆိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။ •	အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားနိူင်သည်။
•	မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (ဘုရင့်နောင်) နှင့်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	အချိန်ပိုဆင်းနိူင်ရမည်။
•	မင်္ဂလာတောင်ညွှန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။ •	အရောင်းအားစိတ်ဝင်စားပြီး စကားပြောရည်မွန်သွက်လက်ရမည်။
•	Model မြှင့် ကားမောင်းနိူင်ရမည်။Auto Gear ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိူင်ရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိူင်ရမည်။ •	ဘယ်မောင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိူင်ရမည်။ •	လိုအပ်လျှင်အချိန်ပိုဆင်းရမည်။ အရက ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	ကမာရွတ်မြို့နယ် တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Admin & HR Assistant Manager
307 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	လေဘာနှင့် ပါတ်သက်သည့် ဥပဒေများအား နားလည် ဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။ •	JD နှင့်ပါတ်သက်၍ Admin ပိုင်း (7၀% ၊HR ပိုင်း (3၀%) ဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ် ရုံးခွဲအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။
•	ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် Tea Shop ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ဘဏ်ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်နိူင်ရမည်။ •	နေ့စဉ် အရောင်းငွေများအား လက်ခံနိူင်ရန် အချိန်ပို ဆင်းနိူင်ရမည်။ •	မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်နှင့် နီးသူအားပိုဦးစားပေးမည်။
•	မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်အတွက်ဖြစ်သည်။့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ရမည်။ •	အမြန်လျှောက်ထားနိူင်သည်။
•	ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။ •	အချိန်ပေးဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။
308 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် Tea Shop ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည် ။အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	ကမာရွတ်မြိုနယ် / ရန်ကင်းမြို့နယ် (Tea Shop ) တွင်တာဝန်ဆောင်နိုင်ရမည် ။
HR Associate HR, Training & Recruitment jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Thuriya Win Company HR,Training & Recruitment jobs HR,Training & Recruitment jobs HR Associate Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Cashier/HR M/F (1)
COLOUR CARE BUSINESS GROUP "Mr.Snack"
Urban Kitchen Co.,Ltd (Bonchon Myanmar)
Myanmar International Business Academy
HR Manager F (1)
HR Manager M/F (.)
HR Manager/Assistant Manager
Admin and HR Associate